थाहा खबर: किन लगाउने जनै?, किन गर्ने रक्षाबन्धन?
किन लगाउने जनै?, किन गर्ने रक्षाबन्धन?
श्रावण शूक्ल पूर्णिमा। नेपाली समाजमा यो दिन जनैपूर्णिमा वा रक्षाबन्धनको नामले प्रचलित छ। यो दिन बिहान सबेरै पवित्र तलाउ वा नदीमा गएर विधिपर्वक स्नान गरी कश्यप, भरद्वाज, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि र वशिष्ट गरी सप्तर्षिहरूलाई तर्पण दिइन्छ।
यी ऋषिहरूको विधिपर्वक आवाहन गरी पूजा आराधना गरी घरमै अथवा कुनै देवालयमा बसेर जनैको विधिपूर्वक पूजा गरिन्छ। जनै नमन्त्रिकन लगाउन नहुने मान्यताअनुरूप बिहानै वैदिक एवं पौराणिक मन्त्रहरूले मन्त्रिने परम्परा छ।
यसै दिन जनै मन्त्रिने कुनै विधान छैन। जनैको आवश्यक्ता जहिले पर्छ, त्यही दिन नै मन्त्रेर लगाउन सकिने भएपनि सबैले मन्त्रन नजान्ने हुनाले पनि बाह्रमण पुरोहितले मन्त्रेर दिएको जनै वर्षदिनभरि लगाउने गरेको बुझ्न सकिन्छ। रुद्राभिषेक पाठ गरेर पनि जनै मन्त्रिने चलन छ। कसैकसैले नजिकका शिवालयमा पनि यो काम सम्पन्न गर्छन्।
यसै दिन जनै मन्त्रिने कुनै विधान छैन। जनैको आवश्यक्ता जहिले पर्छ, त्यहि दिन नै मन्त्रेर लगाउन सकिने भएपनि सबैले मन्त्रन नजान्ने हुनाले पनि बाह्रमण पुरोहितले मन्त्रेर दिएको जनै वर्षदिनभरि लगाउने गरेको बुझ्न सकिन्छ।
के हाे यज्ञोपवित अर्थात् जनै ?
सनातन धर्ममा जनैको ठूलो महत्त्व छ। जनैलाई संस्कृतमा यज्ञोपवीत भनिन्छ। यज्ञोपवीत यज्ञ र उपवीत शब्दको संयोजन भएर बनेको शब्द हो, जसको अर्थ हुन्छ– यज्ञ प्राप्त गराउने। अथवा यज्ञद्वारा पवित्र गरिएको उपवीत वा सूत्रलाई नै यज्ञोपवीत भनिन्छ। विधिपर्वक तयार गरिएको जनैले बल बुद्धि र तेज प्रदान गर्छ भन्ने विश्वास छ। हामीले अहिले प्रयाेग गर्ने कपासबाट बनाइन्छ।
सामान्यतया वैदिक देव तथा पितृकार्यमा यज्ञोपवितको अनिवार्यता मानिएको छ। वस्त्र वा सूत्रको रूपमा प्रयोग गरिने कतिपय स्मृति पुराणमा उल्लेख छ। यज्ञोपवीतको महत्वको बारेमा प्रष्ट पार्दै भनिएको पनि छ– यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्,आयुष्यमग्य्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः अर्थात्, यज्ञोपवीत (जनै) परम पवित्र वस्तु हो, यो सृष्टिको प्रारम्भमै सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीको साथमा नै उत्पन्न भएको हो, आयु , तेज र बल प्रदान गर्ने यज्ञोपवीत धारण गर्नुपर्छ।
सामान्यावस्थामा यज्ञोपवीत देब्रे काँधबाट दाहिने बाहुको मुनि पर्ने गरी लगाइन्छ। यस अवस्थालाई सव्य भनिन्छ। बायाँ काँधमा सारेर दाहिने बाहुमुनि पर्नेगरी लगाइने अवस्थालाई अपसव्य भनिन्छ। मालाजस्तो गरी लगाइने अवस्थालाई कण्ठ अथवा निवित भनिन्छ। श्राद्धादि कार्यमा यज्ञोपवीतलाई सव्य, अपसव्य र कण्ठ गरी तीन अवस्थामा लगिन्छ। देवकार्य सव्य र पितृकार्य अपसव्य भएर गरिन्छ।
यज्ञोपवीतको अधिष्ठाता क्रमशः ओमकार, अग्नि, अनन्त, चन्द्र, पितृगण, प्रजापति, वायु, सूर्य र सर्वदेव हुन्। विधिपूर्वक यी देवताहरूको आवाहन गरी बनाइएको यज्ञोपवीत लगाउनाले यी देवताहरूबाट क्रमशः ब्रह्म, तेज, धैर्य, आल्हादकत्व, स्नेह, पालन, शुचि, प्राण र सर्वगुण प्राप्त हुने शास्त्रमा उल्लेख छ।
किन गर्ने रक्षाबन्धन?
जनैसँगै रक्षासूत्रको पनि पूजा गरिन्छ। यसरी तयार भएको जनै र रक्षासूत्र आफ्ना पुरोहितहरूबाट लगाउने परम्परा छ। जनै व्रतबन्ध भइसकेका द्विजाति पुरुषहरूले मात्र लगाउँछन् भने रक्षासूत्र सबैले लगाउने गर्दछन्। रक्षासूत्रले विभिन्न विपत्तिबाट बचाउने भविष्यपुराणमा उल्लेख छ।
दानमा नाम कहलाएका राज बलि वामन अवताररूपी भगवान् विष्णुद्वारा रक्षा गरिएको प्रसंगसँग रक्षाबन्धन जोडिएको छ। रक्षाबन्धन गर्दा पढिने मन्त्रमा पनि ‘जसरी बलिको रक्षा विष्णुद्वारा भयो, त्यसैगरी यो रक्षासूत्रले तिम्रो रक्षा होस्’ भन्ने वचन आउँछ।
नेपाली समाजले नयाँ जनै लगाउने र हातमा रक्षासूत्र बाँध्ने दिनको रूपमा मात्र बुझेको पाइन्छ। तर वैदिक धर्मावलम्बीहरूले अध्ययन अध्यापन सुरु गर्ने पवित्र दिनको रूपमा पनि यस दिनको महत्त्व छ भन्ने कतिलाई थाहा नहुन सक्छ। चार वेदमध्ये यजुर्वेलाई यज्ञप्रधान वेद मानिन्छ। यजुर्वेदका शुक्ल र कृष्ण गरी दुई भेद छन्। मन्त्र र ब्राह्मण ग्रन्थ छुट्टाछुट्टै भएको यजुर्वेदलाई शुक्लयजुर्वेद भनिन्छ। वाजसनेय (याज्ञवल्क्य) ले प्रवचन गरेको शुक्लयजुर्वेदको शाखालाई वाजसनेयी भनिन्छ। बहुसंख्यक नेपाली ब्राह्मण पनि यसै शाखाका अध्येता छन्।
नेपाली समाजले नयाँ जनै लगाउने र हातमा रक्षासूत्र बाँध्ने दिनको रूपमा मात्र बुझेको पाइन्छ। तर वैदिक धर्मावलम्बीहरूले अध्ययन अध्यापन सुरु गर्ने पवित्र दिनको रूपमा पनि यस दिनको महत्त्व छ भन्ने कतिलाई थाहा नहुन सक्छ।
माध्यन्दिनीय–वाजसनेयी शुक्लयजुर्वेद संहिता चालिस अध्याय र १९७५ कण्डिकामा विभाजित छ। यस शाखाका मन्त्रसंहितामा दर्शमासपूर्ण, अग्न्याधान, अग्निहोत्र, चातुर्मास, निरूढपशुबन्ध, अग्निष्टोम, सोमयाग, वाजपेय, राजसूय, अश्वमेध आदि अग्निमा प्रयुक्त हुने मन्त्रहरूको साथै ईशावास्योपनिषद् संग्रहित छन्। शुक्लयजुर्वेदको ब्राह्मण ग्रन्थ शतपथ हो भने श्रौतसूत्रकल्पमा कात्यायन र गृह्यसूत्रमा पारस्करगृह्यसूत्रको अध्ययन गरिन्छ।
शुक्लयजुर्वेदीहरूका संस्कारादि कर्महरू पारस्करगृह्यसूत्रमा उल्लेख छन्। आफ्नै वेदशाखाको विधिअनुसार जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कार सम्पन्न गर्नुपर्ने शास्त्रीय विधान छ।
हिजोआज व्रतबन्धकै बेलामा नाममात्रको वेदारम्भ गराउने चलन छ। तर वेदारम्भ व्रतबन्धकै दिनमा नगरी सामान्यतया श्रावण वा भाद्र पूर्णिमामा ब्राह्मणहरूले अध्यायोपाकर्म (उपाकर्म) गरी वेद पढाउने कार्यको प्रारम्भ गर्ने परम्परा रहेको बुझिन्छ। अथाऽतोऽध्यायोपाकर्म– ओषधीनां प्रादुर्भावे श्रवणेन श्रावण्यां पौर्णमास्याम्, श्रावणस्य पञ्चमी हस्तेन वा पारस्कर गृह्यसूत्रअनुसार श्रापणपूर्णिमा वा वैदिक नभोमासका श्रवण नक्षत्र वा हस्ता नक्षत्र वा अन्य शास्त्रोक्त दिनमा उपाकर्म गरी गुरुबाट विधिवत् रूपमा चार पाँच महिनासम्म अध्ययन गर्ने शास्त्रीय विधान बताइएको छ।
हिजोआज जनैपूर्णिमाको दिन श्रावणीप्रयोग आदि विभिन्न विधान अपनाइए पनि वैदिक उपाकर्मको महत्त्वलाई ओझेलमा पारिएको छ। यसैगरी वैदिक परम्परामा धार्मिक कार्यको अनुष्ठान सौरमान सापेक्ष चान्द्रमानका आधारमा गर्नुपर्ने विधान छ। त्यसैले वर्षाकालको प्रारम्भ हुनेवित्तिकै वनजङ्गलमा औषधीको प्रादुर्भाव हुन थालेपछिको पूर्णिमामा गर्नुपर्ने पर्व उपाकर्म लगभग वर्षाको अन्त्यतिर मनाउन थालेपछि वास्तविक समयभन्दा पर पुगेको छ।
प्रधानमन्त्रीको मातहतमा आएको विभागको एक्सन्: ४२ फर्मविरुद्ध छ अर्बको मुद्दा
पहिलो प्रदेश परिषद् बैठकः समस्या समाधानको जिम्मा कार्यदललाई!